Ahoana ny fampiasana App IO amin'ny fandoavana, famerenam-bola ary fifandraisana 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Raha mitandrina ny fanavaozana ny teknolojia natomboky ny fanjakana italianina isika Azo antoka fa efa nandre momba ny fampiharana IO vaovao isika, noforonin'ny PagoPA ary azo apetraka an-kalalahana amin'ny smartphone rehetra ary azon'ny olom-pirenena Italiana rehetra ampiasaina. Mpampiasa maro avy hatrany no nahita olana tamin'ny fampiasana ny app IO satria nandefa ilay app tamin'ny solosaina fotsiny izy ireo nefa tsy nahalala ny fomba hampiasana azy, na inona na inona izany, na koa ny fomba hidirana, izay mety toa eo noho eo ihany. tsy azo atao raha tsy mbola nahare momba ny SPID sy ny mombamomba ny nomerika isika (mampalahelo fa afaka mampiasa ny rindranasa IO).
Amin'ity toro-lalana ity dia hasehoko anao ny fomba fampiasana ny fampiharana IO handoavana vola, famerenam-bola ary fifandraisana amin'ny governemanta, hahafahany mandoa vola haingana any amin'ny magazay ary mahazo tombony amin'ny fandraisana andraikitra mifandraika amin'ny fanaraha-maso ny fandaniana sy valisoa natokana ho an'ireo izay mandany vola sasany.
Ahoana ny fampiasana ny fampiharana IO
Ny fampiharana IO dia tsotra ampiasaina, fa ny afaka manararaotra azy araka izay tratry ny ananany voalohany dia tsy maintsy mahazo ny SPID isika, avy eo miroso amin'ny fisintomana ary miditra amin'ny fampiharana. Amin'ireto toko manaraka ireto dia hasehonay anao koa ny fomba hanampiana carte de crédit na karatra mialoha sy ny fomba ahazoana fampandrenesana momba ny fifandraisana amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana.
Ampandehano ny SPID ary ampidino ny fampiharana IO
Alohan'ny hampiasana ny fampiharana IO dia mila mamorona ny SPID isika, izay ny mari-pahaizana nomerika voamarina mivantana avy amin'ny fanjakana italianina. Ity kara-panondro manokana ity dia azo alaina amin'ny mpanome maro, izay manolotra azy maimaim-poana (noho izany tsy mila mandoa na inona na inona amin'izany izahay). Amin'izao ireo mpamatsy tsara indrindra hampihetsika ny SPID haingana Izaho dia:
Nasaina ny PosteID SPID
SPID miaraka amin'ny ID Namirial
Na iza na iza mpisafidy nofidinao, fenoy fotsiny ny angon-drakitra takiana, safidio ny fomba fanamarinana izay mifanentana indrindra aminay (ohatra, ho an'ny Poste Italiane, tsara ihany koa ny mandeha any amin'ny paositra) ary avy eo mahazo ny mari-pahaizana SPID, hampiasaina aoriana ao amin'ny fampiharana IO. Raha te hahafantatra ny fomba hampiasana ny SPID tsikelikely izahay dia manasa anao hamaky ny torolalana Ahoana ny fangatahana sy hahazoana ny SPID mi Ahoana ny fomba hampiasana ny SPID: torolàlana feno.
Aorian'ny fahazoana ny SPID dia azontsika atao misintona ny fampiharana IO maimaim-poana ho an'ny Android sy iPhone mivantana avy amin'ny Google Play Store sy Apple App Store.
Manampia carte de crédit, prepaid na debit
Vantany vao ampiana amin'ny finday ny fampiharana dia sokafy, kitiho ny bokotra Midira amin'ny SPID ary mifidy ny mpamatsy SPID izay amoronay ny mombamomba ny nomerika.
Mampiditra ny kaody fanamarinana izahay, manamafy ny angona azo avy amin'ny SPID, avy eo manaiky ny fepetra fampiasana ny fampiharana. Ao amin'ny efijery manaraka dia misafidy PIN fanakanana 6 isa izahay, misafidy raha hampihetsika ny fanamarinana biometrika ary hanamafy ny adiresy mailaka (efa azo avy amin'ny SPID).
Raha vantany vao miditra ny efijery manokana momba ny fampiharana ianao dia afaka manampy carte de crédit, karatra mialoha (toy ny Postepay) na karatra ATM amin'ny alàlan'ny fanindriana eo amin'ny faran'ny menio kitapom-batsy, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny ankavanana ambony amin'ny singa hametrakamifidy ny lahatsoratra Fomba fandoavam-bola sy mifantina eo Kara-trosa, debit na karama mialoha, Karatra BancoPosta na Postepay mi Karatra fandoavam-bolaBAMCOMAT. Miorina amin'ny karazana karatra ananantsika izahay, avy eo ampidirinay ny nomeraon'ny karatra, ny daty lany daty ary ny kaody fiarovana (CVV2, matetika ao ambadika). Amin'ny farany dia tsindrio Tohizo fa tsara hanamafisana ny fanampiana ny karatra amin'ny fampiharana IO.
Aorian'ny fampidirana fomba fandoavam-bola marina amin'ny fampiharana IO dia ampidirinay ny menio About us eto ambany hahitana fiasa mahasoa hafa amin'ny fampiharana: mandoa hetra amin'ny fiara, safidio hoe aiza no handanianao ilay tapakila fialan-tsasatra, mandray fanairana momba daty voatondro ho an'ny hetra IMU sy TASI, mandray fampandrenesana momba ny fahataperan'ny TANY (hetra amin'ny fako), mandoa saram-pianarana ary mampihetsika famerenam-bola.
Raha eo amin'ireo voatonona ireo ny tanànantsika (azontsika atao koa ny manampy ny tanàna amin'ny tanana ary jereo raha ampiarahina amin'ny serivisy PagoPA) dia afaka mandoa saika ny hetra rehetra amin'ny Internet izahay, amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo fomba fandoavam-bola tohana. Liana amin'ny fandoavam-bolam-panjakana ve isika? Amin'ity tranga ity dia manasa anao izahay hamaky ny tari-dalanay Ahoana ny fomba hampiasana ny vola Cash State: karatra, fepetra ary fetra.
Fomba ahazoana serasera avy amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana
Ho fanampin'ny karatra, te hampiasa ny rindran-damina IO ve izahay handraisana ireo fifandraisana avy amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana? Amin'ity tranga ity dia ampy ny mitazona ny fampiharana apetraka amin'ny telefaona, satria isaky ny fifandraisana vaovao dia hisy fampandrenesana halefa amin'ny efijery (raha tsy miseho ny fampandrenesana dia zahao ireo toerana fitehirizana angovo, indrindra amin'ny Android). Mba tsy hahadiso fampandrenesana iray dia azontsika atao ihany koa ny mandefa ireo hafatra avy amin'ny app IO amin'ny adiresy mailaka antsika: raha hanao izany dia sokafy tsotra izao ny app IO amin'ny findainao finday avo lenta, midira miaraka amin'ny fidirana PIN na biometrika, tsindrio eo ambany ny menio piraofilina, safidio ny menio Mandefa hafatra amin'ny alàlan'ny mailaka ary farany manindry ny singa Alefaso amin'ny serivisy rehetra. Raha te-hisafidy tanana ireo serivisy ahazoana hafatra ao amin'ny boaty mailaka isika dia mifidy ilay zavatra Misafidiana serivisy isaky ny serivisy ary asehontsika ny karazana hafatra tiana horaisina.
Raha manohy manana olana amin'ny fampandrenesana ny app IO izahay dia mamporisika anao hamaky ny torolalanay Raha tara ny fampandrenesana dia vonoy ny fanatsarana bateria Android mi Hatsarao ny fampandrenesana Android amin'ny efijery hidin-trano.
Ny fampiharana IO angamba no tsara indrindra amin'ny ambaratonga IT noforonin'ny Fanjakana Italiana: raha ny tena izy, mora ampiasaina ilay rindranasa, mifangaro tsara amin'ny serivisy SPID rehetra, mamela anao handray ny famerenam-bola nomen'ny fanjakana, mampihetsika ny serivisy fampandrenesana hetra ary hetra sy endrika fifandraisana amin'ny andrim-panjakana hafa, nefa tsy voatery hiresaka adiresy PEC (izay atoro anao hamaly ny hafatra voaray).
Raha te-hamorona mailaka voamarina izahay hamaly ireo mailaka napetrak'ireo andrim-panjakana ireo dia mamporisika anao izahay hamaky ny lahatsoratray. Ahoana ny fomba hahazoana adiresy mailaka PEC (mail voamarina).
Raha mifanohitra amin'izany no tadiavintsika karatra karama mialoha hampifangaroana amin'ny fampiharana IO, dia afaka mamaky ny hevitray izahay. Kara-trosa virtoaly maimaim-poana maimaim-poana mi Karatra mialoha mialoha mividy an-tserasera tsy misy risika.